Febroary 3, 2018 Admin
Ny Ontario dia neken'ny Vaomieran'ny Fiarovana ny voalohany Kanada blockchain fifanakalozana-varotra tahirim-bola (ETF), izay nametraka ny hanomboka ny Toronto Stock Exchange amin'ny herinandro ambony.
fijinjana Portfolios, mahaleo tena ny fitantanana ny orinasa kanadiana fampiasam-bola, nametraka ny antontan-taratasy mialoha noho ny Blockchain Technologies ETF tamin'ny Janoary, mikatsaka ny hanome kanadianina mpampiasa vola miaraka amin'ny fahafahana hividy any an-blockchain sehatry ny teknolojia, araka ny Globe and Mail.
Ny petra-bola ho vola “amin'ny hitsiny Fiarovana ny issuers hita, mivantana na tsy mivantana amin'ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny blockchain sy nizara masiaka natao tamintsika teknolojia,” ny andro hijinjana hoy fanambarana Portfolios. Ny orinasa mikasa ny ETF ny manara-maso blockchain teknolojia tetikasa, mirroring ny Fijinjana Blockchain Technologies Index.
Araka ny Globe and Mail, Canadian orinasa roa hafa, Matokia voalohany Portfolios Kanada sy nivoatra bola Group Inc., ihany koa ny hanomboka blockchain mitady vola, ary nametraka ny voalohany prospectuses amin'ny dalàna tamin'ity herinandro ity.
Previous Post:Double hamafa tarehimarika Fiondrehana Crypto Asset Market
Next Post:Ny fifanarahana vaovao PHANTOM no hifaninana amin'ny Tselatra Network